Shiinaha Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Ice Cream Rotary Buuxinta Soosaarida Mashiinka iyo Warshadda | Runchen
Runjin © Krunt ™ -Z12 Z12 Mashiinka Buuxinta Rotary Ice Cream
Waxaa loo isticmaalaa buuxinta jalaatada, suugada, ama biyaha-barafka oo leh noocyo kala duwan oo koobab ah, koonisyo. Mashiinka caadiga ahi wuxuu soo saari karaa oo keliya hal nooc oo soo saar jalaato ah, laakiin haddii lagu daro saldhigga qalabka kala duwan, qaababka kala duwan ee koobabka iyo koobabka jalaatada ayaa sidoo kale la soo saari karaa.
Runchen Krunt-Z 12 waa xal qiimo jaban oo aad ugu habboon warshad yar .Waxay la kulmi kartaa macmiil aan lahayn awood awood sare .laakiin waxay soo saari kartaa noocyo kala duwan oo jalaato leh Heer tayo sare leh .Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa baaritaanka shaybaarka ama horumarinta jalaatada.
Koobab ku xir qaybta qaybiyaha, oo kuwan ayaa loo ridi doonaa si midba mid loo geliyo si loo sugo buuxinta .Waxaa jira noocyo kala duwan oo wax lagu buuxiyo oo ku saleysan waxyaabo cayriin oo kala duwan sida jalaatada, suugada, ama biyaha-barafka. Nooca buuxintu wuxuu noqon karaa buuxin tiro, buuxsiin goos goos ah, iyo xoqid goynta buuxinta (hal qalab oo goyn ah ayaa lagu lifaaqi doonaa).Runchen Krunt-Z12 sidoo kale waxaa lagu qaabeyn karaa qaybo qurxin oo kala duwan si loogu qurxiyo dusha jalaatada. Iyadoo la raacayo alaabooyinka qaababka kala duwan, waxay dooran kartaa furka daboolida waxqabadka kala duwan sidoo kale waxay xirxiran kartaa alaabada iyadoo la jarayo filim horay loo sii qaaday.Ka dib markii daboolyada lagu daro ama la shaabadeeyo, qaybta soo saaridu waxay soo saari doontaa alaabada waxayna ka soo gudbin doontaa mashiinka buuxinta si dhakhso leh u qaboojiso, illaa la buuxiyo.
Heerka caadiga ahTMQaabka -Z12 wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah .Shaxeynta mashiinka buuxinta wuxuu la kulmi karaa Heerarka nadaafadda ee heer caalami iyo heer sare. Qaab dhismeedka qaab dhismeedka furan wuxuu ka hortagi karaa biyaha si hufan oo si habboon loo nadiifiyo.Dhamaan nashqadaha naqshadeynta oo ay kujiraan biiyaha, xarkaha tuubada iyo qeybaha wadida waxay waafaqayaan shuruudda xiriir fudud, bedelida iyo nadiifinta.
Nidaamka Wadista Main
Mowjadda isdabajoogga ah ayaa wadata kala wareejinta iyo kala wareejinta, waxayna xakameysaa wareegga isdaba jooga ah ee saxanka moduleka iyo saldhigga kor iyo hoos. U dirista calaamado xilliyeed PLC iyadoo la adeegsanayo koodhka barnaamijka wareega si loo xakameeyo dhululubo si sax ah, loona sameeyo dhammaan qaybaha inay si deggan u shaqeeyaan.
KruntTMMashiinka buuxinta wareegga -Z12 waxaa gacanta ku haya xarunta PLC. Erayada PLC, soosaarka jalaatada si aad ah ayaa loo hubin karaa, bedelkeeduna aad ayuu ugu habboon yahay .Waxay leedahay meel 2MB lagu keydiyo, oo si toos ah ayey u bilaabi kartaa ama u joojin kartaa. Tobannaan badeecadood ayaa horay loo sii qorsheyn karaa.
Xogta badeecadaha waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda PLC .oo guddiga gacanta oo dhan waxaa lagu qalabeeyaa badhamada taabashada iyo muujinta dhijitaalka ah, oo siinaya hawlgal habboon iyo kormeer.
Nidaamka Kombaresarada Hawada iyo Nidaamka Vacuum
Iyada oo ku saleysan shuruudda nadaafadda cuntada, dhammaan qeybaha kombaresarada hawada waxaa laga sameeyaa alaab ka caaggan daxalka, saliidda. Dhammaan fallaaraduhu waxay qaataan habka korontada oo lagu rakibay gudaha jir. All silsiladda caadiga ah waxay ka timaaddaa 'Festo'. Qaybaha Nidaamka Faakiyuumka oo loogu talagalay kala-bixiyeyaasha Daboolka iyo daboolida wax lagu daro waxaa isku dubbariday qalab xirfadeed.
KruntTMMashiinka buuxinta -Z12rotary wuxuu qaadanayaa naqshadeynta naqshadeynta horumarsan iyo qaybo shaqo oo awood leh si loo daboolo baahiyaha horumarinta warshadaha jalaatada. Faa'iidada ugu weyn ayaa ah inay ka shaqo badan tahay nooca dhaqameed.
Waxay qaadataa xoojinta qallafsanaanta jir si hawlgalka mashiinku uga xasilloon yahay kan caadiga ah.
Inbadan nidaamka wadista deggan :
Isticmaalka kala-wareejinta qaybsan iyo wareejinta si mashiinka ugu weyn uu u noqdo mid xasilloon, aad ugu habboon in la baaro lana dayactiro. Saldhigyada badankood waxay gebi ahaanba isticmaalaan qaabdhismeedka mashiinka si ay mashiinka uga dhigaan mid deggan oo buuq yar.
Nidaamka shukulaatada heerkulka joogtada ah ：
Tikniyoolajiyadda kululaynta heerkulka joogtada ah waxaa loo isticmaalaa mashiinka buuxinta si looga fogaado ifafaalaha xannibaadda ee ay keento adkeynta shukulaatada marka heerkulka deegaanku hooseeyo.
Qaybaha wax iibsiga
waxaan ku siin qaybo kala duwan. Xaaladdan oo kale, baaxadda wax soo saarka waa la sii ballaadhin karaa. Hoos waxaa ku yaal miis tixraac ah ：
U dhigma dayactirka
Si loo hubiyo shaqada mashiinka, Runchen Krunt-Z12 mashiinka buuxinta waa inuu ku fiicnaadaa xulashada qaybaha dayactirka asalka ah. Haddii aad dooratid kuwa kale, kuwani waxay lahaan doonaan cunsurro aan degganeyn, waxayna horseedi doonaan qalab jajaban. Fadlan la tasho kahor intaadan isticmaalin.
Khadadka 1 sadar 2 khadadka
awoodda saacaddii Heerka 2400 4800
xawaaraha orodka （stoke / min） 10 ～ 45 10 ～ 45
awood 2 kW
awoodda kaydinta ee shukulaatada 25L
daahan sheyga 2-6ml
wax soo saarid 4-8ml
gaaska tiro (saliid la'aan, biyo) ≤2.0g / m3
hawada isticmaalka 1 m3/ min
cadaadiska shaqada (min) 6bar (87LB / inji laba jibbaaran)
Baaxadda ugu weyn
Hore: Runjin © Krunt ™ -4000 Mashiinka Isku Darka Miro
Xiga: Runjin © Krunt ™ -G4 Mashiinka Buuxinta Jalaatada
Runjin © Krunt ™ -G4 Mashiinka Buuxinta Jalaatada